လိင်အကြောင်း – Myanmar Live
လိင်အကြောင်း / လူနေမှုပုံစံ
“ဖီရိုမုန်း” နှလုံးသားကိုအရည်ပျော်စေတဲ့ကိုယ်ရနံ့ !!
July 31, 2019 July 31, 2019 - by BB
ကိုယ်နဲ့လိင်ကွဲပြားတဲ့သူတွေဆီကနေ အံ့သြောမှင်သက်လောက်တဲ့ မွှေးရနဲ့ ဒါမှဟုတ် ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ရနံ့ တွေရတာမျိုးကို ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးတဲ့ဘော်ဒါတွေရှိပါသလား။ ဒီအနံ့ဟာ “ရေမွှေးအနံ့” မဟုတ်သလို …
March 15, 2019 April 16, 2019 - by MC
မေး : ဆရာရေ…ရည်းစားအသစ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးအဖြူဆင်းတာ ပကတိဖြစ်စဉ် တခု ဖြစ်ပြီး သူ့အလိုလိုပြန်ကောင်းလာမှာ မဟုတ်လားရှင့် ဖြေ : …
ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုရယူဖို့ နည်းလမ်း ၆ ခုနဲ့ ဆွဲဆောင်ကြရအောင်
March 8, 2019 April 16, 2019 - by MC
မကြာသေးခင်ကပဲ ချစ်သူများနေ့ပြီးခဲ့ပါပြီ ငေးမှိုင်နေရတဲ့လူလွတ်တွေကတော့ သူများအတွဲတွေကိုကြည့်ပြီးအချစ်ကိုရွံမုန်းသွားဟန်တူပါတယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ ကိုယ်ခိုးပြီးချစ်နေရတဲ့သူကမှ ကိုယ့်ကိုပြန်မချစ်သေးတာ။ ဒါဆို ကိုယ်ကတိတ်တခိုးချစ်နေတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ …
March 1, 2019 March 1, 2019 - by MC
ခေတ်ကြီးဟာ အင်မတန်ကိုတိုးတက်လို့လာပါပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှပွင့်လင်းလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လိင်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးမည်ဆိုပါက ရှက်ကြောက်စမြဲပင်ဖြစ်ပါတယ် လိင်ကိစ္စကိုကျွနုပ်တို့နိုင်ငံသားတွေ က သူများတွေမသိအောင် နောက်ကွယ်မှာပဲ ဆွေးနွေးသင့်တဲ့အရာတခုလို့ …
အခုတလော အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါမှာ ကျိန်းစပ်ပြီးယားယံနေတယ် စိုးရိမ်ရသလားဗျ!!
February 22, 2019 February 22, 2019 - by MC
အမေး : အခုတလော အားလပ်ရပ်သိပ်မရှိတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ချိန်သိပ်မရှိဘူး ပြီးတော့ အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါမှာကျိန်းစပ်ပြီးယားယံနေတယ် ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဟာစိုးရိမ်ရသလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ် အဖြေ …
အန္တရာယ်ရှိမလား! ဒီချစ်သူများနေမှာ ချစ်သူနဲ အတူနေပြီး ရာသီလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ရင်
February 15, 2019 February 15, 2019 - by Panidapetch
မေး : မကြာခင်မှာ ဗယ်လတိုင်း(ချစ်သူများ)နေ ရာက်တော့မယ်။ ကျွန်မက ချစ်သူကို 2ယောက် အတူ ကြည်နူးခြင်းနဲ …
ကျွန်မက ယောင်္ကျားလေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာပါ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်တွေမက်ရင် လိင်တူအချင်းချင်းဆက်ဆံ တယ်လို့ပဲမက်တယ်
February 8, 2019 February 8, 2019 - by MC
ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေမတူညီတဲ့အချက်က ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ အရာဝတ္တု၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်၊ နေရာအထိုင်အခင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ လိင်စိတ်ကြွလေ့ရှိကြပါတယ် အလားတူပဲမိန်းကလေးတွေက ရုပ်ရှင်ကား တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါ …
ကျန်းမာရေး / လိင်အကြောင်း / လူနေမှုပုံစံ
ညဘက် နဲ့ နေ့ဘက် ဘယ်အချိန်က SEX လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်မလဲ ?
February 1, 2019 February 1, 2019 - by K.Khongsub
မေး တစ်ရံတစ်ခါဆိုရင် မနက်ပိုင်းလိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ် တစ်ခါတစ်လေ ဆိုရင်လည်း ညဘက် မှ လိင်ဆက်ဆံချင် စိတ်ရှိတယ် တခါတလေမှသူနဲ့တထပ်တည်းလိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ် …
PM 2.5 အမှုန်တွေကို ရှူရှိုက်မိတာများသွားရင် ပန်းသေမှာ ကြောက်ရတယ် ဒီသတင်းမှန်ပါသလားခင်ဗျာ
January 18, 2019 January 18, 2019 - by K.Khongsub
မေး:“အခုပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ PM 2.5 အမှုန်တွေကို ရှူရှိုက်မိတာများသွားရင် ပန်းသေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိ တယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေမှာဖတ်ရတာ ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလဲခင်ဗျာ၊ …